Book of Philippians Hordhac iyo Soo koobid
Diinta & Ruuxnimada Axdiga Cusub
Hordhaca Kitaabka Filiboyka
Waa maxay buugga Filibiliinta ku saabsan?
Farxadda waayo-aragnimada Masiixiyaddu waa mawduuca ugu weyn ee ku dhex mara kitaabka Filibiinta. Ereyada "farxad" iyo "farxad" waxaa loo isticmaalaa 16 jeer warqadda .
Rasuul Bawlos wuxuu warqad u qoray si uu u muujiyo mahadnaq iyo kalgacayaal kaniisadda Filibiin, taageerayaasha ugu xooggan ee wasaaradda. Aqoonyahadu waxay isku raaceen in Bawlos uu qorey waraaqda labada sano ee ka soo wareegtay guriga Rooma.
Bawlos wuxuu kaniisaddii ku noolaa Filiboy qiyaastii 10 sano ka hor, safarkiisii ​​labaad ee adeegga Falimaha Rasuullada 16aad.
Jacaylkiisa jacaylka ah ee rumaystayaasha Filiboy ayaa u muuqda midka ugu weyn ee qoraallada Bawlos.
Kaniisaddu waxay u dirtay hadiyado Bawlos markii uu ku jiray silsilado. Hadiyadahaas waxaa bixiyay Epaphroditus, oo ahaa hoggaamiye kaniisadda Filibiin ah oo dhammaadkii Bawlos gacan ka geystay adeegga Rooma. Markuu Bawlos u adeegayay, wakhti xaadirka ah wuxuu ahaa mid halis ah oo u dhawaa inuu dhinto. Markuu soo bogsaday, Bawlos waxa uu Epaphroditus u soo diray Filibos isagoo raacaya warqadda kaniisadda Filibiin.
Marka laga reebo muujinta rumaystayaasha Filiboy ee hadiyadahooda iyo taageeradooda, Bawlos wuxuu qaatay fursad uu ku dhiiri geliyo kaniisadda arrimaha arrimaha la xidhiidha sida hoosaysiinta iyo midnimada. Rasuulku wuxuu uga digay "Judiers" (Yuhuudiyiin sharci yaqaan ah) waxayna bixiyeen tilmaamo ku saabsan sida loo noolaado nolol farxad leh oo Masiixi ah.
Bogagga Filibiyaanka, Bawlos wuxuu farriin fariin xooggan ku saabsan qarsoodiga ah ee ku qanacsan.
Inkasta oo uu la kulmay dhibaatooyin daran, saboolnimo, garaacis, xanuun, iyo xitaa xabsigiisii ​​hadda, xaalad kasta oo Bawlos ah uu bartay inuu barto. Ilaha uu ka helayo farxadkiisa farxad wuxuu ku salaysan yahay inuu ogaado Ciise Masiix :
Waxaan mar horeba ku fikiray in waxyaalahaani ay ahaayeen kuwo qiimo leh, laakiin hadda waxaan u maleynayaa inaysan qiimo lahayn sababtoo ah waxa Masiixu sameeyay. Haah, oo waxyaalahan oo dhammu waa wax aan waxba tarayn iyo xumaanfal toona isagoo garanaya kii aan Rabbi Ciise Masiix ka maqlay. Waayo, aawadiis ayaan keligay hadhay, waanan afgembiyey oo wax kastaba waannu ka cabsad sharxi lahayn, oo Masiixa baannu helaynaa oo aynu noqonno mid la mid ah. (Filiboy 3: 7-9a, NLT ).
Yaa qora Kitaabka Filiboyka?
Filimiyayaashuna waa mid ka mid ah afarta Rasuullo ee Bawlos ee aflabada .
Culimada intooda badani waxay rumaysan yihiin in warqadda lagu qoray qoraallo AD 62, halka Bawlos lagu xidhay Rooma.
Bawlos wuxuu u qoray meydka rumaystayaasha ee Filiboy oo lala wadaago iskaashi dhow iyo jacayl qaas ah. Waxa uu sidoo kale wax ka qabay waraaqda odayaasha kaniisadaha iyo adeegayaasha .
Goobta Kitaabka Filiboye
Badanaa xabsi guri ku yaal magaalada Roma, oo ay ka buuxaan farxad iyo mahadnaq, Bawlos wuxuu u qoray inuu dhiirigeliyo addoomannadii uu ku noolaa Filiboy. Filibiin Roomaan ah, Philippi waxay ku taallaa Makedoniya, ama hadda Waqooyiga Giriigga. Magaalada waxaa loo magacaabay Philip II , aabaha Alexander The Great .
Mid ka mid ah jidadka waawayn ee ganacsiga ee u dhexeeya Yurub iyo Aasiya, Philippi wuxuu ahaa xarunta ganacsiga ee ganacsiga oo isku dhafan jinsiyado kala duwan, diimo, iyo heer bulsho. Bawlos oo ku yaala qiyaastii 52 AD, kiniisadda Filiboy waxaa laga sameeyay badiba kuwa aan Yuhuudda ahayn.
Mawduucyada Kitaabka Filiboye
Ku faraxsan nolosha Masiixiyaddu waa wax ku saabsan aragtida. Farax run ah kuma saleysna xaaladaha. Fure u ah kalsoonida joogtada ah waxaa laga helaa xiriir xiriir la leh Ciise Masiix . Tani waa aragtida rabbaaniga ah ee Bawlos uu rabay in uu kugula xariiro waraaqdiisa Faransiiska.
Masiixu wuxuu tusaale u yahay rumaystayaasha. Iyada oo la raacayo astaamaha uu leeyahay qadarin iyo allabaryo, waxaan ku faraxsanaan karnaa xaaladaha oo dhan.
Masiixiyiintu waxay la kulmi karaan farxad marka la eego sida Masiixu u silcay:
... wuxuu naftiisa ku hoosaysiiyay addeecida Ilaah oo wuxuu ku dhintay dhimasho dembi iskutallaabta. (Filiboy 2: 8, NLT)
Masiixiyiintu waxay ku farxi karaan adeegga:
Laakiin waan farxi doonaa xataa haddaan naftiisa lumiyo, oo intaan wax ku dhufto si Ilaah ugu soo geliyo dalka aad u sii deggan. Oo waxaan doonayaa in dhammaantiin la wadaagno farxad. Haah, waa inaad ku raaxaysataan, oo anna farxad baan idiin siin doonaa. (Filiboy 2: 17-18, NLT)
Masiixiyiintu waxay la kulmi karaan farxad aaminaad leh:
Haddana mar dambe qudhayda kuma aan socon, oo xukummadaydana waa lay xukumay. halkii, waxaan xaqnimo ku noqonayaa rumaysadka Masiixa. (Filiboy 3: 9, NLT)
Masiixiyiintu waxay la kulmi karaan farxad marka la siinayo :
Anigu deeqsinimo weyn ayaan ku siiyey hadiyado aad iigu soo dirtay Epaphroditus. Iyagu waa qurbaan la gubo oo qumman oo Ilaah ku farxa. Oo isla kaas wuxuu u shaqeeyaa hooskii dhimashada, kaas oo loo bixiyey Ciise Masiix. (Filiboy 4: 18-19, NLT)
Astaamaha Muhiimka ah ee Buugga Filibiliiya
Bawlos, Timoteyos , iyo Epaphroditus waa shakhsiyaadka waaweyn ee kitaabka Filiboye.
Aaladaha Muhiimka ah
Filiboy 2: 8-11
Oo markuu isagii arkay ayuu wuxuu is-hoosaysiiyey oo addeecay xataa inuu dhimasho istaahilo, oo iskutallaabta ayuu ku dhinto. Haddaba sidaas daraaddeed Ilaah isaga aad buu u sarraysiiyey, oo wuxuu isaga siiyey magaca magac kasta ka sarreeya; oo jilib kastoo ah waxyaalaha samada ku jira iyo waxyaalaha dhulka jooga iyo waxyaalaha dhulka ka hooseeyaaba, iyo carrab kasta oo afka qaaliga ah oo Masiixa ku jira. inay u ahaato ammaantii Ilaaha Aabbaha ah. (ESV)
Filiboy 3: 12-14
Mana aha inaan hore u helay amase hore la ii kaamilay, laakiinse waan ku sii dadaalayaa inaan qabsado wixii Ciise Masiix ii qabtay. Walaalayaalow, anigu ku tirin maayo inaan aniga qudhaydu kaamilsanahay. Laakiin wax uun baan samaynayaa: oo illowday wixii uu jebiyey oo aad u sii qallafsanaa oo sii socdoon, waxaan ku dadaalayaa inaan sare u qaadno xigmadda Ilaah oo la ballanqaaday waagii Ciise Masiix. (ESV)
Filiboy 4: 4
Mar kasta Rabbiga ku faraxsanaada. Haddana waan ku farxi doonaa. (NKJV)
Filiboy 4: 6
Waxba ha ka welwelina, laakiinse wax kastaba baryinla'aan iyo tukasho iyo mahadnaqid ka sii badan tii cod lahayd. (NKJV)
Filiboy 4: 8
Ugu dambaysta, walaalayaalow, waxaan idinku leeyahay, Wax walba oo run ah, iyo wax kasta oo sharaf leh, iyo wax kasta oo xaq ah, iyo wax kasta oo daahir ah, iyo wax kasta oo xaq ah, iyo wax kasta oo xaq ah, iyo kii faanaa, iyo mid kasta oo raalli ka ah; waxyaalahan. (NKJV)
Soo koobida kitaabka Filibiinta
Ku faraxsantahay xaalada, xitaa silica - Filimiyaanka 1.
Joy in adeega - Filibiil 2.
Ku Faraxsanaanta iimaanka - Filibiyaanka 3.
Joy ku siinaya - Filibiil 4.
Filibos Rasuulka - Fududeeyaha Ciise Masiix
Muxuu Kitaabka Quduuska ah Ku Daahiray Jaahilnimada Ruuxa
Isbedelka - Soo koobista Kitaabka Quduuska ah
Rasuulladii Yooxanaa - Rasuulka ugu horreeya ee dhimashada Ciise
Ma waxaa jira heerar dembi iyo ciqaab jahannamo?
Muxuu Kitaabka Quduuska ah u Yeedhay Jinni?
Yuusuf kii reer Arimataya
Sidee Ayuu Ilaahay Ku Amaani Karaa
La kulan Nicodemos: Ilaah doonaya
Fahmidda Fasalkaaga - Sahanka Jimicsiga ee ardayda ESL / EFL
Miyuu Dubka UV iftiinka Nalalka? Miyaad ka heli kartaa sunburn?
Top 15 Buugaag ku saabsan Guriga beeraha
Isticmaalka Warbaahinta Dijital ah ee loogu talagalay Deynka Guriga
Waa maxay Reality Virtual?
Heerka (Noocyada Maqalka)
Talooyin loogu talagalay Waalidiinta Xannaanada ee Habboon
Sida loo qoro hiragana: ya, yu, yo - や, ゆ, よ
7 Duufaannada Caalamiga ah ee Hurricane
Sida Loo Shaqeeyo Ingiriis Dhegeysiga Xirfadaha Fahamka
Maxay tahay Bank Run?
Fikradda Fikrada ah ee loogu talagalay Xubnaha Maqalka
Mudo intee le'eg ayuu Queen Bee ku nool yahay?
CRAWFORD Magaca Dambe Macnaha iyo Asalka
5 Celebrities Who Passed White ee Hollywood ee Golden Age
Sidee Simiil u Shaqeyn
Ogolaansho tiknoolajiyada Florida
Biography ee Anaximander
Sidee loo sameeyaa 360 Saacadaha Spin halka Wakeurfing
Miyuu yahay dembi ah in dad badani isweydiiyaan sababtoo ah Cimilada xun?
5 Tilmaamo si aad u kobciso buundada Qoraalka Qoraalka ee ACT
Bhaisajyaguru: Bukaanka daawada
Dhibcaha SAT ee hooseeya
Sida Loogu Isticmaalayo Lahaansho Si Lacag Gaar Ah Loo Isticmaalo
Visite de Reims: Sheeko Af-Ingiriisi fudud Easy Easy
Waa Maxay Xaqiijin go'an?
Albaabada ugu fiican ee Helloween